2008 ~ မာန်လှိုင်းငယ်
8:20 PM မာန်လှိုင်းငယ်2comments
နှစ်သစ်ကို ကြို၊ လူတွေ ပျော်ဖို့
ဆိုကြမယ် ဟေ့၊ သီချင်းကို ကွယ်
ဂီတာကို တီး၊ လူတွေ မူးလို့
အားလုံး အတူ၊ အော်လိုက်ရအောင်
၀မ်း တူး သုံး …
`ဟတ်ပီး နယူး ရီးရား´၊ `၂ ၀ ၀ ၉´
`ဟတ်ပီး နယူး ရီးရား´၊ `၂ ၀ ၀ ၉´။
သူငယ်ချင်းတို့ … … ။ ။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက်။
မနက်ဖြန်ဆိုတာ ညတညပဲ ခြားတယ်
10:35 AM မာန်လှိုင်းငယ်2comments
အမှန်တရားနှင့် ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့ သင်္ကေတအဖြစ် ရှိနေမြဲ။
ကူပါ … ကယ်ပါ …
တချို့က မျက်လုံးမှိတ် ရှာနေတုန်း
တချို့က စမ်းတ၀ါးဝါး ရှာနေတုန်း
တချို့က တတ်သုတ်ရိုက် နှိပ်နေတုန်း
တချို့က ပင်ပန်းမောဟိုက်စွာ နှိပ်နေတုန်း
တချို့က ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ ထိနေတုန်း
တချို့က ယုံကြည်ခိုင်မာစွာ ထိနေတုန်း
တချို့က စတေးခံ ရင်ဆိုရင် ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်နိုင်တယ်။
အဆိပ်ပါတဲ့ရေကို မသိကျိုးကျွံ သောက်သုံးနေတယ်။
အမှန်တရားရဲ့ နေခြည်ဟာ ပေါ်လာမှာပါ။
လူငယ်တို့ရဲ့ လက်၊ ခြေဖ၀ါးဟာ
ကိုယ့်လက်၊ ကိုယ့်ခြေဖ၀ါးကို ငုံ့ကြည့်စရာတောင် မလိုတော့ပါဘူး။
ဘ၀နဲ့ချီပြီး ခါးသီးမှုတွေ ပြည့်သိပ်လာတာနဲ့အမျှ
တဆတ်ဆတ်နဲ့ အန်ကျလာဖို့ ၀န်မလေးတော့ပါဘူး။
ထပ်မံ ရှင်နိုင်ဖို့ …
လူငယ်တို့ရဲ့ လက်၊ ဖြေဖ၀ါးကို ယုံကြည်ရဲမယ်ဆိုရင်
မနက်ဖြန်ဆိုတာ ညတညပဲ ခြားသလို
2008 ခုနှစ်။ ဒီဇင်ဘာလ (29)ရက်။
မိတ်ဆွေ ဘယ်လဲ ဘာလဲ
4:31 PM မာန်လှိုင်းငယ်2comments
မာယာအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းဘလော့ဂ်ကနေ တဆင့် ကူးယူဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ ကလစ်လိုက်ပါ။ ကျနော် ဆရာလူထုစိန်ဝင်းရေးတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတွေကို တတ်နိုင်တလောက်တော့ ပြန်တင်ပေးချင်လို့ပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့်လည်း ပါ ပါတယ်၊
သင့်အိမ်ထဲကို တဖက်ခြံက မွေးကင်းစမြွေပွေးတကောင် တိုးဝင်ရောက်ရှိလာတယ်ဆိုရင် သင်ဘာလုပ်မလဲ။အမိဝမ်းဗိုက်က ထွက်လာ ကာစကလေး သနားပါတယ်ဆိုပြီး နို့တိုက်မွေးမြူထား မလား။
ဒါမှမဟုတ်။ တနေ့နေ့မှာ ကိုယ့်အိမ်က ကလေးတွေကို ကိုက်သတ်မယ့် အန္တရာယ် ကောင်လေးလို့ သဘေထားပြီး ရိုက်သတ်ပစ်လိုက် မ လား။
မြွေပွေးလေးတကောင်မဟုတ်ဘဲ၊ မျက်လုံးကလေးတောင် ကောင်းကောင်း မဖွင့်တတ် သေးတဲ့ မွေးကင်းစ ကြောင်ငယ်ကလေးတ ကောင်ကို တွေ့လိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေ ဘာလုပ်မလဲ။
ဒီ ဒုတိယမေးခွန်းကို မိတ်ဆွေဘယ်လိုဖြေမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းဆဝါး မိနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘယ်လို လူသားမျိုးမဆို ကြောင်သတ္တဝါကို ရွံတတ်မုန်းတတ်သူ ဖြစ်စေအုံးတော့ မွေးကင်းစ သနားစရာ သတ္တဝါလေးတကောင် တကျီကျီ တကျာကျာနဲ့ အော်မြည်နေတာကို မြင်တွေ့လိုက်ရရင် သနားဂရုဏာ သက်ဝင်ပြီး ရင်ခွင်ထဲပွေ့ ပိုက်ထား မိကြမှာ။ နို့ရှာပြီး တိုက်မိကြမှာချည့် ဖြစ်လို့ပါ။ ပထမမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို ဆဝါးမိဖို့ကြတော့ သိတ်မလွယ်လှပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖြေတဲ့လူရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို လိုက်ပြီး အဖြေ အမျိုးမျိုး ထွက်လာနိုင်လို့ပါ။
မိတ်ဆွေဟာ မြွေပွေးဆိုတာ ကြီးကြီးငယ်ငယ် မြွေပွေးပဲ။ အဆိပ်နဲ့၊ အစွယ်နဲ့၊ လူကို သေစေအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ သတ္တဝါပဲလို့ တွေးမိမယ်ဆိုရင် ကျောက်တုံးကြီးကြီးတတုံးယူပြီး ထုသတ်လိုက်မှာပါ။
မိတ်ဆွေဟာ မြွေပွေးကို မြွေပွေးလို့မတွေးပဲ မွေးကင်းစ သနားစရာ သတ္တဝါ ကလေးတခု အဖြစ်နဲ့သာ တွေးမိမယ်ဆိုရင်တော့ နို့တိုက်ပြီး မွေးမြူထားမိမှာပါ။
မိတ်ဆွေဟာ မြွေပွေးကို မြွေပွေးလို့တွေးမိပေမယ့် လတ်တလော အန္တရာယ် မဖြစ်စေတာရယ်၊ ဘေးလူတွေက ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူ တဦးရယ်လို့ အထင်ခံရမှာ စိုးရိမ် တာရယ်ကြောင့် တုတ်ကလေး တချောင်းနဲ့ ကော်ပြီး နီးရာချုံပုတ်တခု ထဲပစ်ထည့်လိုက်မိ ပါလိမ့်မယ်။
သင် ဘယ်လိုတွေးပြီး ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
သင်ဟာ ရိုးရိုးလူသာမန်တဦး မဟုတ်ပဲ၊ စာတိုပေစ အဖတ်အရှု အလေ့အလာ ဝါသနာ ထုံသူတဦး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ပြီးတော့ မြန်မာပြည်မှာနေပြီး မြန်မာစကားပြောတဲ့ မြန်မာလူမျိုး တဦး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် မေးခွန်းကို ပုံစံပြောင်းပြီး မေးကြည့်ပါရစေ။
ဒီနေ့ မြန်မာစာပေနယ်အတွင်းကို မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုအဆင့်၊ ပကတိအခြေအနေတို့နဲ့ နည်းနည်းလေးမှ မအပ်စပ်တဲ့၊ ဖြစ်တည်မှု ပဓါနဝါဒတို့၊ ကပ်ဖကာဝါဒတို့၊ ဆာရီယယ်ဝါဒတို့စတဲ့ စိတ္တဇစာပေ အယူအဆဝါဒ အမျိုးမျိုး တွေ၊ ကာလလရေကြည် သန္ဓေတည်အောင် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ် နေကြတာ တွေကို.....
မိတ်ဆွေ ဘယ်လိုတွေးပြီး ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ဒီ စိတ္တဇ စာပေဝါဒတွေကို သွတ်သွင်းလာကြခြင်းဟာ ပြည်သူပြည်သားတွေ အထူး သဖြင့် လူငယ်လူရွယ်လေးတွေကို မိမိတို့ရဲ့ ပကတိ အခြေအနေမှန်ကို မျက်ခြည်ပြတ်သွား အောင် တမင်တကာ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိနဲ့ မျက်စိထဲ သဲပက်ပြီး လမ်းလွှဲကို ဆွဲခေါ်သွားဖို့ လုပ်ဆောင်နေပါလားလို့ ရှုတ်ချမလား။
ဒါမှမဟုတ် စာပေတို့ အနုပညာတို့ဆိုတာ ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးရှိနေအောင် ဆန်းသစ် တီထွင်နေကြရတာဖြစ်တယ်။ ဆန်းသစ်တာ မှန်သမျှ အားလုံးကို လက်ခံရမယ်လို့တွေးပြီး၊ အဲဒီ စိတ္တဇအယူဝါဒတွေကို ကြိုဆိုထွေးပိုက်ထားမလား။
ဒါမှမဟုတ် သမိုင်းအချိုးအကွေ့တခုကို ကြုံကြိုက်တဲ့အခါတိုင်း အခါတိုင်းမှာ လှိုင်းဂယက်ကလေးတွေ ထတတ်မြဲ ဖြစ်တယ်။ နောင်ကျတော့လဲ အချိန်က ဆုံးဖြတ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ သမိုင်းက သက်မှတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါမျိုးတွေဟာ လက်ဖက်ရည်ပန်းကန် ထဲမှာကျတဲ့ မုန်တိုင်းလောက်သာရှိပါတယ်။ ဘာမှ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အန္တရာယ် မပြုနိုင်ပါ ဘူး။ ဒါကြောင့် ဘာမှဝင် ရှုတ်ချတားဆီးတာတွေ လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး လို့တွေးပြီး ကိုယ်ထိုးမြဲ တယောလေးကိုပဲ အေးအေးဆေးဆေး ဆက်ထိုးနေလိုက်မလား။
သင်ဘယ်လိုတွေးပြီး၊ ဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ သိထားနိုင်မယ် မဟုတ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့အဖြေဟာ သင်ဘယ် နေရာက ရပ်ကြည့်နေသလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာတည်နေလို့ပါ။
လူတယောက်ရဲ့ အမြင်ဆိုတာ သူရပ်ကြည့်နေတဲ့နေရာ အပေါ်မှာတည်ပြီး ဖြစ်လာရ တာပါ။ အဲဒီအမြင်ကို အခြေခံပြီးမှ သူ့အတွေး၊ သူ့ဆုံး ဖြတ်ချက်တို့ ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် မိတ်ဆွေရဲ့ အတွေးနဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ အဖြေကို ဘယ်သူမှ မှန်မှန်ကန်ကန် သိထားနိုင်စွမ်း ရှိမယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း မသိထားနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီမေးခွန်းသုံးခု မေးဖို့ဖြစ်လာရတဲ့ အခြေခံအကြောင်းတရားတွေ အကြောင်း ကိုတော့ ကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေခံ အကြောင်းတရားတွေကို ဆင်ခြင်သုံးသပ် ကြည့်ပါ။ လေးလေးနက်နက် တွေးကြည့်ပါ။ ရှေ့ကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်သလို အတိတ်ကိုလည်း ပြန်သုံးသပ် ကြည့်ပါ။ လတ်တလော ပစ္စုပ္ပန်မျက်မွေးတထောက်ကလေးကိုသာ မကြည့်ဘဲ မျက်စိတဆုံး ထိမျှော်ကြည့်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ရဲ့ အတွေးအမြင်အသိနဲ့ ကြိုက်သလို ဆုံးဖြတ်ပြီး အဖြေထုတ်လိုက်ပါ။ အဲဒီအဖြေဟာ ကျွန်တော်နဲ့ သဘောထား ကိုက်ညီတဲ့ အဖြေဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မညီပေ မတူပေမယ့်လည်း မိတ်ဆွေရဲ့အဖြေက အငှားတွေး၊ အငှားမြင်၊ အငှားသိကပေါ်ထွက်လာတဲ့ သူများရဲ့ခေါင်းထဲက အတွေးကို မိတ်ဆွေရဲ့ အငှားပါးစပ်က ပြောပေးတဲ့ အဖြေမဟုတ်ပဲ မိတ်ဆွေရဲ့ ကိုယ်တိုင်အတွေး၊ ကိုယ်တိုင်အမြင်၊ ကိုယ်တိုင်အသိက ပေါ်ထွက်လာတဲ့ အဖြေဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် လေးစားပါတယ်။ တန်ဖိုးထားပါမယ်။ လက်ခံသင့်တဲ့ အဖြေလို့ထင်ရင်လည်း ကျွန်တော့်အဖြေကို ကြက်ခြေခတ်ပစ်လိုက်ပြီး မိတ်ဆွေရဲ့အဖြေကို ပြောင်းလဲလက်ခံပါ့မယ်။
အမှန်တရားကို ရှာကြတဲ့အခါမှာ မျက်စိကိုဖွင့် နားကိုစွင့်ထားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။
ကဲ အခု ကျွန်တော် မေးခွန်းသုံးခု ပေါ်ထွက်လာစေတဲ့ အခြေခံအကြောင်းတရားကို ရှင်းပြပါရစေ။
ဒီနေ့ မြန်မာစာပေလောကမှာ လက်ချိုးရေတွက်ရင် လက်နှစ်ဖက်တောင် ပြည့်အောင် မရှိတဲ့ လူတစုက မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ပကတိ အခြေအနေကို လုံးဝမျက်ကွယ် ပြုထား ရုံသာမက လူငယ်လူရွယ်လေးတွေ အားလုံးကိုပါ ပကတိအခြေအနေကို မျက်ခြည်ပြတ်သွား အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက ဗုံမဟုတ်ပတ်မဟုတ် စိတ္တဇစာပေ အယူအဆတွေ သွတ်သွင်းပေးနေကြပါတယ်။ သူတို့သွတ်သွင်းလာတဲ့ စာပေအယူအဆ ဆိုတာတွေဟာ တကယ်တော့ တိုးတက်ပါတယ်လို့ နာမည်ကောင်း ယူချင်ပြီး တိုးတက်တဲ့ သူတွေရဲ့ အလုပ်မျိုးကို မလုပ်နိုင်တဲ့၊ မလုပ်ရဲ့တဲ့၊ အချောင်သမားတွေရဲ့ ဆင်ခြေလုံးတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတ္တသမားတွေရဲ့သမားဂုဏ်ပြဝါဒတွေသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒါတွေကို တချို့က လူငယ်တွေရဲ့အသံလို့ လွဲမှားစွာ ထင်မှတ်နေကြပါတယ်။ လူငယ်တွေကို တီထွင်ခွင့်တွေပေးကြပါ။ ဆန်းသစ်ခွင့်တွေ ပြုကြပါ။ လူငယ်တွေရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဆန္ဒပြုသံတွေကို ပိတ်ပင်တားဆီးမလုပ်ကြပါနဲ့ ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေလဲ ပြော တတ်ကြပါတယ်။ လူငယ်၊ လူငယ်နဲ့သာပြောနေကြတာ ဘယ်လိုလူငယ်လဲဆိုတာတော့ ခွဲခွဲခြားခြား မပြောကြပါဘူး။ ဂျာမဏီနိုင်ငံမှရှိတဲ့ တူရကီ လူမျိုးတွေရဲ့ အိမ်တွေကို လိုက်ပြီးမီးရှို့နေတာ၊ တအိမ်သားလုံး ကလေးတွေပါမကျန် မီးလောင်တိုက်သွင်းနေတာစတဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးတွေကို လုပ်နေတဲ့ နာဇီ လက်သစ် လူငယ်မျိုးတွေလား။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှရှိတဲ့ လူမည်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေကို မီးလိုက် ရှို့နေကြတဲ့ ကေသုံးလုံးဂိုဏ်းသား လူငယ်မျိုးတွေလား။
ဂျပန်ပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားတွေကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လိုက်တိုက်၊ ချိန်းကြိုးတွေနဲ့ရိုက် လုပ်နေကြတဲ့ Hell's Angels လမ်းသရဲဂိုဏ်းသား လူငယ်မျိုးတွေလား။
ဒီလိုလူငယ်မျိုးတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အားမပေးနိုင်ပါဘူး။ တီထွင် ဆန်းသစ်တယ် ဆိုတိုင်းလည်း မထောက်ခံသင့်ပါဘူး။ အနုမြူဗုံးတို့၊ ဓာတုဗေဒနဲ့ အဆိပ်ငွေ့ဗုံးတို့၊ ရောဂါပိုးမွှားဗုံးတို့၊ နပန်းလောင်မီးဗုံးတို့ စတဲ့ တီထွင်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ ထောက်ခံကြ ရမှာလား။ ဆန်းတိုင်း၊သစ်တိုင်း ထွင်တိုင်းလည်း ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူသားတွေကို အကျိုးရှိစေတဲ့၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမျိုးသာ လိုလားအပ်ပါတယ်။
လူသားတွေရဲ့ ဦးဏှောက်ကို အဆိပ်ကျွေးတဲ့၊ အယူအဆမှန်သမျှ၊ ဝါဒမှန်သမျှ၊ လုပ်ရပ်မှန်သမျှ ရှုတ်ချကြရပါမယ်။ ကိုယ့်တယောလေး ကိုယ်ထိုးပြီး အေးအေးနေမယ်ဆိုရင် တော့ အဆိပ်ပင်လေးတွေ တနေ့တခြား ကြီးထွားလာပါလိမ့်မယ်။ မြွေပွေးလေးက မြွေပွေးကြီး ဖြစ်သွားပါ လိမ့်မယ်။ မြွေပွေးကြီးကနေ မြွေပွေးလေးတွေ အရာအထောင် ဖြစ်သွားပါ လိမ့်မယ်။
အဲဒီ အခြေခံအကြောင်းတရားတွေကြောင့် ကျွန်တော်ရဲ့ မေးခွန်းသုံးခု ပေါ်ထွက်လာရ တာပါ။
ဒီအခြေခံ အကြောင်းတရားတွေကို နက်နက်နဲနဲ ဆင်ခြင်ပြီး မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြည့်လိုက်ပါ မိတ်ဆွေ။
မှန်တာနဲ့ မှားတာ၊ တရားတာနဲ့ မတရားတာတို့မှာ ကြားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မတို့ မှာလည်း ကြားဆိုတာ မရှိပါဘူး။
မဏ္ဍိုင် မဂ္ဂဇင်း။ ၁၉၉၇၊ ဂျူလိုင်လ။
(မော်ဒန်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်ထဲက မုန်တိုင်းငယ်နှင့် အခြားဆောင်းပါးများ စာအုပ်၊ ပထမအကြိမ် ၁၉၉၉၊ စာမျက်နှာ ၈၁ မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်)
မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း ရှိနေသမျှ ကိုယ် …
2:05 PM မာန်လှိုင်းငယ် 1 comment
"မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း ရှိနေသမျှ ကိုယ် …"
မင်းကို အချိန်တိုင်း … အချိန်တိုင်း တွေ့ချင်နေတယ်။
မင်းကို မနက်နေထွက် … ညနေ၀င်တိုင်း
မင်းကို ရာသီတွေ ပြောင်းလဲသွားလဲ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ ။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၀)ရက်။
11:27 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
အခုလာမယ့် (၁၇)ရက်နေ့မှာ ၀ါးတွင်းကာလ။ လပြည့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်၊ အခုလို ၀ါတွင်းကာလရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘဲ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ သားတော်တွေဖြစ်တဲ့ ရဟန်း သံဃာတော်တွေကို ဆွမ်းတွေ လောင်း၊ ၀တ္ထုအစုစုတို့ကို လှူတဲ့မြင်ကွင်း။ ဘုန်းကြီးကျောင်း မှာ တရားဘာဝနာသွားရောက်အားထုတ်တာကိုလည်း ပြန်ပြီးတွေ့မြင်ရမယ့် ဒီဝါတွင်းကာလ မှာ ကြည်ညိုဖွယ် တွေ့မြင်ရမှာကို တွေးပြီး တအားကို ၀မ်းသာအားရ ကြည်နူးမိမှာ အမှန်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့်ဗျာ ဒီဝါတွင်းကာလမှာ ကျနော်က အလှူတွေလုပ်နိုင်ပါ့မလား၊ ဒါမှမဟုတ် တရားဘာဝနာများ ပွားများနိုင်ပါ့မလား၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ မြန်မာပြည်မှာ နာဂစ်မုန်းတိုင်းဒဏ်ခံထားရတဲ့ လူတွေအတွက်တော့ ကျနော် ဆုတောင်းပေးနေမှာပါ။ သူတို့တွေရဲ့ ဘ၀ဟာ အင်မတန်မှကို ချွတ်ချုံကျသွားတဲ့ ဘ၀ပါပဲ။ သူတို့တွေရဲ့ ဘ၀အသစ်တဖန်တိုးတက်လာစေဖို့အတွက် ကျနော် ဒီဝါတွင်းကာလမှာ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့မယ်။ ကျနော်ဟာ သူတို့တွေအတွက် ဆုတောင်းပေး နိုင်ရုံသက်သက်ပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အခုလို ဒီစကားကိုပဲ သုံးဖြစ်တာပါ။
မြန်မာပြည်က လေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကော ဒီဝါတွင်းကာလမှာ ဘာတွေများ လုပ် ဆောင်နိုင်ပါ့မလဲ၊ သူတို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ဘ၀အတွက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကော ယူနိုင်ကြပါ့ မလား။ ကျနော် တွေးမိပါတယ်ဗျာ။
နောက်ပြီး နာဂစ်ဒဏ်ခံ ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင် ပိုမိုပြီး ဆုတောင်းလုပ်ဆောင်ပေးရ မှာပါ၊ ဒီဝါတွင်းကာမှာပေါ့ဗျာ၊ ဒါကြောင့် အားလုံးသော လူသားအားလုံး ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အရာလေးနဲ့ ဒီဝါတွင်းကာလမှာပဲ လုပ်ဆောင်ပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်း ချင်တယ်ဗျာ။
အားလုံးသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအားလုံးလဲ ဒီဝါတွင်းကာလမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု အစုစုတို့ကို ရယူနိုင်ကြပြီး စိတ်နှလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
12:41 PM မာန်လှိုင်းငယ်2comments
အားလုံး၊ အားလုံးသော သားသမီးတွေ
မေမေ့ပုံပါတဲ့ တီရှပ်အင်္ကျီကို ၀တ်ဆင်ထားရင်း
မေမေ ဘယ်လိုများရှိနေရှာမလဲ …။
အာရုံတွေ ဖြန့်လွှတ်ထားလိမ့်မယ်လို့ မြင်မိလေရဲ့။
ကြာလှရောပေါ့ … ။
မိုးတွေရွာတိုင်း "ထ" ပွင့်တဲ့ ပန်းတွေလိုမျိုး
မေမေ့ရဲ့ ရဲရင့်တဲ့သတ္တိသွေးတွေ …
မေမေ့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်း ဂရုဏာတွေ …
မေမေ့ရဲ့ ပြည်သူနဲ့ နိုင်ငံအပေါ်ထားရှိတဲ့ မေတ္တာတရားတွေ …
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထာဝရအောင်ပွဲခံနိုင်တုန်း ရှိလေရဲ့။
ပါးရည်တွေ တွန့်နေပါစေ …
မေမေ့အတွက် မွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲကို ကျင်းပရင်း ဂုဏ်ပြုသွားမှာပါ။
မေမေစု "အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေ"
"မေမေစုကို ချက်ချင်းလွတ် …
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၉)ရက်။
မအိုသော၊ မနာသော၊ မသေဆုံးသော …
3:10 PM မာန်လှိုင်းငယ်3comments
မိခင်ဆိုတာ ကျနော့်ဘ၀နဲ့ယှဉ်ပြောရရင် ဖ၀ါးလက်နှလုံး၊ ပခုံးလက်နှသစ်ကတည်း က အရာရာကို ထိန်းသိမ်းပဲ့ပြင်၊ ပြုစုယုယခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် အရမ်းကို အနှိုင်းမဲ့ဖြစ်ပါ တယ်။ အင်မတန်ကိုလည်း ကျေးဇူးကြီးမားလှပါတယ်။ သားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင် အသက်ပေးပြီး မွေးခဲ့တဲ့၊ ချစ်ခဲ့တဲ့ မိခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အတွက်တော့ မိခင်တွေရဲ့ အနှိုင်းမဲ့မှုကို စာလုံးတွေနဲ့ ဖော်ကျူးလို့ ဘယ်လိုမှ ပြည့်စုံလုံလောက်နိုင်မယ် မဟုတ်ဘူး လို့ပဲ ပြောရမှာပါ။
မိခင်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကျနော်တို့တွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ "ငါတို့ရဲ့ မိခင်"၊ "ငါတို့ရဲ့ မွေးမိခင်"၊ "ငါတို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် မေမေ" လို့ ကိုယ့်မိခင်လို့သာ အတွေးက ၀င်လာကြတယ်။ ပြောဆိုကြတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ ဒီမိခင်၊ ဒီမိဘက ပေးခဲ့လို့၊ မွေးခဲ့လို့၊ လူ့လောကကြီးထဲကို ရောက်လာကြရတာပဲမဟုတ်လား။ ဒါဟာ တကယ့်ကို မှန်ကန်နေတဲ့ အရာပါ။
ကျနော် .. မိခင်တို့ရဲ့ အကြောင်းကို မပြေခင် အင်္ဂလိပ်စာလုံးဖြစ်တဲ့ (Mother) မြန်မာလို (မိခင်)ဆိုတဲ့အက္ခရာကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ လူတိုင်းတော့ သိပြီးသား ပါ၊ ဒါပေမယ့် ကျနော် သိသလောက်၊ နားလည်သလို ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာလိုပြန် အဆင်ချောအောင် ရေးထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကတော့ သူငယ်ချင်းဆီကတ ဆင့် ရထားလို့ ပြန်ဖော်ပြလိုက်တာပါ။ ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
Mother (မိခင်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်)
M = is for the millions things she gives us.
မိခင်ဟာ ကျနော်တို့ကို သန်းပေါင်းများစွာသော ထိုက်တန်တဲ့အရာကို ပေးခဲ့သူပါ။
O = means only that she's growing old.
မိခင်ဟာ သားသမီးတွေရှင်သန်ဖို့အတွက် ပေးဆပ်ရင်း အိုမင်းရင့်ရော်သွားခဲ့သူပါ။
T = is for tears she to save us.
မိခင်ဟာ သားသမီးတွေရဲ့ နောင်ရေးအတွက် ကျမျက်ရည်များခဲ့ရသူပါ။
H = is for heart of purest gold.
မိခင်ဟာ ကျနော်တို့အတွက်တော့ ဖြူစင်အေးမြတဲ့ ရွှေစင်နှလုံးသားပိုင်ရှင်ပါ။
E = is for her eyes, with love sight.
မိခင်ဟာ ကျနော်တို့ကို ဂရုဏာများနဲ့ ကြီးမားတဲ့မေတ္တာ၊ အကြင်နာတွေနဲ့ ကြည့်ရှု ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့သူပါ။
R = means right she'll always be.
မိခင်ဟာ ကျနော်တို့အတွက် အမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့ စကားတွေကိုတာ ပြောဆိုတတ် တဲ့ သူပါ။
ကျနော် ဒီစာကိုဖတ်လိုက်တိုင်း မိခင်တိုင်းကို စာနာလာမိတယ်၊ ပိုမိုနားလည်လာ တယ်၊ မိခင်တိုင်းဟာ သားသမီးတွေ ကောင်းစားဖို့အတွက်၊ သားသမီးတွေ လူတလုံး၊ သူတလုံးဖြစ်လာဖို့အတွက်၊ သားသမီးတွေ ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကို ကျားကုတ်ကျားခဲ၊ ကိုယ်ဖိရင်ဖိ၊ မအိပ်မနေ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပြီး ကျွေးမွေးခဲ့တာတွေ၊ ပြုစုစောင့်ရှေက်ခဲ့တာတွေ၊ ဒီသားတွေ၊ ဒီသမီးတွေ အတောင်စုံအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ တာတွေဟာ မိခင်တိုင်းရဲ့ မေတ္တာ၊ မိခင်တိုင်းရဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေပါပဲ။
မိခင်တွေကို ကြည့်လိုက်ပါ။ သားသမီးတွေအပေါ်ဘယ်လောက်ထိအောင် ချစ်လဲ ဆိုရင် သားသမီးတွေရဲ့အသက်ကို သူတို့ရဲ့ အသက်ထက်တောင် တန်ဖိုးထား ပုံအောပြီး ချစ်ကြတာပါ။
ဘာကြောင့် ကျနော် ဒီလိုပြောရသလဲဆိုရင် ကျနော့်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့လို့ပါပဲ။ ကျနော် ပြန်ပြောပြချင်တယ်။
"ကျနော် ဆယ်တန်းနှစ်တုန်းကပါ၊ ကျနော့်အမေ နေမကောင်းဖြစ်နေတာ၊ ဖြစ်နေတာက ရိုးရိးမဟုတ်ပါဘူး၊ အိပ်ယာထဲကတောင် မထနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာ၊ ဖြစ်ချင် တော့ ကျနော် ကျောင်းတတ်နေရင်း အဖျားဝင်လာလို့ ဆေးခန်းသွာပြတယ်၊ ပြီးတာနဲ့ အိမ်မှာအနားပြန်ယူခဲ့တယ်။ အမေတို့ရော၊ ဆရာဝန်တို့ပါ ကျနော်အဖျားဝင်တာ ရိုးရိုးပဲဆို ပြီး စိုးရိမ်စိတ်သိပ်မရှိသေးပါဘူး။ တရက်လောက်နေပြီးတာနဲ့ မနက်မှာပဲ ဆေးသောက်ဖို့ ဆိုပြီး ညီမလေးလာနိုးတယ်၊ အဲဒီမှာ ကျနော်ထလို့မရတော့ပါဘူး။ ခြေတွေလက်တွေ လှုပ်လို့ကိုမရတော့ဘူးလေ၊ ပိုဆိုးတာက ခြေထောက်ပါ၊ လမ်းလျှောက်လို့ကိုမရတော့ဘူး။ အဲဒီအကြောင်းကို အဖေရော၊ အမေပါသိတော့ တော်တော်လေးကို စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ အဆိုးဆုံးက အမေပါ။ အိပ်ယာထဲက မထနိုင်တဲ့ အမေဟာ သားသမီးဇောနဲ့ ထလာတယ်၊ ကျနော့်အနေားမှာ လာနေတယ်၊ ကျနော်စားချင်တဲ့ အရာတွေကို မေးတယ်၊ ကျနော် စားချင်၊ ဖြစ်ချင်တာတွေ အကုန်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့။ သူ့ရောဂါတောင် သူမကြည့်တော့ ပါဘူး၊ ကျနော့်အတွက်ကိုပဲ ဂရုစိုက်တယ်၊ ကျနော်ရော၊ အကိုရော၊ ညီမလေးရော အဖေပါ ၀ိုင်းပြောကြတယ်၊ အမေ အိမ်ယာထဲမှာပဲ နေပေါ့၊ မစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့ မရပါဘူး၊ ကျနော့်အနား မှာ နေပြီး ကျနော့်ရဲ့ ဝေယျာဝစ္စတွေကို လုပ်ပေးတယ်။ ရေပတ်တိုက်ပေးတယ်။ ခြေထောက်ပြန်ကောင်းလာအောင် နှိပ်နှယ်ပေးတယ်။ နောက်ဆုံးအားမရလို့ အနှိပ်ကျွမ်း ကျင်တဲ့ အဒေါ်တယောက်ကို ခေါ်ပြီး နှိပ်ခိုင်းတယ်။ ဒါတွေဟာ ကျနော့်အတွက်ပေါ့၊ တကယ်ဆိုရင် အမေလည်း ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး၊ ဒီလို ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ကြား က၊ အိပ်ယာထဲက မထနိုင်တဲ့ကြားက အမေဟာ ကျနော့်အတွက်ကို လာလုပ်ပေးတယ်၊ ဂရုဏာတွေ ပေးတယ်။ သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ထည့်ထးတယ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့ကို ချစ်တဲ့၊ သားသမီးကို ချစ်တဲ့ မိခင်ပါ။ သူဘာဖြစ်နေနေ ဂရုမစိုက်ဘူး၊ သားသမီးကောင်းဖို့၊ သားသမီးအတွက်ကိုတာ ကြည့်တတ်တဲ့၊ စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ မိခင်ပါ။"
ကျနော့်အဖြစ်အပျက်ကို ပြောရင်း ကျနော့်မိခင်ကို ဖော်ကျူးနေတယ်လို့ပဲ ပြော ပြော၊ ချီးမွန်းခန်းတွေ ဖွင့်နေတယ်လို့ပဲ ဆိုဆို၊ ကျနော်ကတော့ ကျနော့်မိခင်ရဲ့ သားသမီး တွေအပေါ် ချစ်တတ်တဲ့၊ သားသမီးတွေအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့၊ သားသမီးတွေအပေါ် ဂရုဏာတရား၊ မေတ္တာတရားပြည့်ဝတဲ့ ကျနော့်မိခင်ကို ကျနော် အလွန်တရာကိုမှ စာဖွဲ့လို့ ကို မကုန်နိုင်တဲ့၊ ခိုင်းနှိုင်းလို့ကို မယှဉ်တာတဲ့ မိခင်ပါပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူအား လုံးလည်း ကိုယ့်ရဲ့မိခင်တွေကို ဒီလိုပဲ ဖွင့်ဆို၊ ပြောချင်မှာပဲ၊ မပြောချင်ရင်တောင် ရင်ထဲမှာ သိမ်းထားမယ်လို့ ကျနော် အခိုင်အမာ ယုံကြည်လက်ခံတယ်။
တချို့သော လူတွေဆို မိခင်ကို ဖော်ကျူးဖွဲ့ဆိုတာတွေ၊ ရေးကြတာတွေ၊ ပြောကြ တာတွေ တပုံ တပုံကြီးပါပဲ။ ကျနော်ထပ်ပြောချင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျနော့်မိခင် ကိုတာ ဖွဲ့ဆို၊ ပြောဆိုပြီး တခြားသော မိခင်တွေကို မပြောရကောင်းလားလို့တော့ မမြင်ပါနဲ့၊ ကျနော် … ကျနော့်မိခင်အပါအ၀င် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ မိခင်တိုင်းကို ကျနော့်မိခင်ကို ပြောသ လို အားလုံးသော မိခင်တို့ကိုလည်း ပြောဆို၊ ဖွဲ့ဆို၊ ရေးပြချင်ပါတယ်။ မိခင်ကို ချစ်တတ်တဲ့ သားသမီးတိုင်းရဲ့ ကိုယ်စား ကျနော် ဒီနေရာကနေ ပြောချင်ပါသေးတယ်။
မိခင်တိုင်း … မိခင်တိုင်းဟာ သားသမီးတွေကို အသက်ပေးပြီး မွေးခဲ့၊ ချစ်ခဲ့တဲ့ သူ တွေပါ။ မိခင်တွေဟာ သားသမီးတွေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ပေးဆပ်သလဲ၊ ဘယ်လို ရပ်တည်ခဲ့သလဲဆိုတာကို ပြောပြချင်တယ်။ ကျနော်တို့ ဘေးအိမ်က အဒေါ်တယောက်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်၊ သားသမီးအတွက် ပေးဆပ်တဲ့အကြောင်းလေးကို ပြောပြမယ်။
သူမမှာ သားသမီး ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ကျနော် မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော် မြင်နေတာက သူမရဲ့ သားသမီးတွေအတွက် တနေ့တာ ရုန်းကန်နေတာကိုပါ။ ကျနော် သတိထားမိတာ တခုရှိတယ်။ သူမမှာ ယောင်္ကျားမရှိတော့တာလား။ ဒါမှမဟုတ် အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်၊ သေချာတာကတော့ သူမအနားမှာ သူမယောင်္ကျားမရှိတာကိုတော့ ကျနော်တွေ့ရတယ်၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အခြေအနေတွေက တော်တော်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်နေတော့ တဖက်နိုင်ငံမှာလာပြီး အလုပ်လာလုပ်နေရတဲ့ သူမပါ။ အဲဒါဟာ သားသမီးအ တွက်ပဲလို့ ကျနော် မြင်ပါတယ်။ သူမဟာ လင်ယောင်္ကျားမပါပဲနဲ့ တဖက်နိုင်ငံမှာ လာပြီး လုပ်ဝံ့တဲ့ သူမဟာ ဘယ်သူ့အတွက် ဖြစ်နိုင်မလဲ … စာဖတ်သူတွေ ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် တွေး လို့ရပါတယ်။ အဲဒါဟာ သူ့ရဲ့ သာားသမီးတွေရဲ့ ရှေ့ရေး၊ အနာဂတ်အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့် မယ်။
ကြည့်ပါဦး၊ သူမဟာ မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ သားသမီးတွေ ကျောင်းသွားဖို့အတွက် စောစောထပြီး လုပ်ပေးရတယ်။ သားသမီးတွေ ကျောင်းသွားပြီးတဲ့အခါ သူမကိုယ်တိုင် အလုပ်ကို စက်ဘီးလေးနဲ့ ပြေးနေရတယ်။ ညနေဆို ငါးနာရီခွဲလောက်မှ အိမ်ပြန်ရောက် တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကလေးတွေက အိမ်မှာ ရှိနေပါပြီ၊ သူမ အိမ်ရောက်တာနဲ့ ကလေး တွေအတွက် ထမင်းချက်ပြုတ်ရ၊ ကလေးတွေရဲ့ အ၀တ်အစားတွေ လျှော်ရဖွတ်ရတယ်။ သားသမီးတွေ မျက်နှာမငယ်ရအောင်၊ တခြားကလေးတွေနဲ့ တန်းတူ သူမကလေးတွေ နေရအောင် အလုပ်တဖက်နဲ့ မနားရအောင် လုပ်ကိုင်နေတာ၊ ကလေးတွေကို ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်နေရပါတယ်။ ဒါဟာ သူမရဲ့ တနေ့တာ အချိန်အတွင်းမှာ လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်နေရတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြတာပါ။
ကျနော် စဉ်းစားကြည့်မိခဲ့တာတွေကို ပြောချင်ပါတယ်။
တကယ်ဆိုရင် ဒီမှာလာပြီး အလုပ်လုပ်နေတာ တယ်မလွယ်ပါဘူး။ သူမ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရသလဲ၊ ရတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့ အိမ်လခ ပေးရတာရယ်၊ မီးခ ပေးရတာရယ်၊ ရေခ ပေးရတာရယ်၊ ကလေးတွေရဲ့ မုန့်ဖိုးပဲဖိုး ပေးရတာရယ်၊ ၀မ်းစားအတွက်ရယ်၊ တကယ်တွက်ကြည့်ရင် လောက်ချင်မှလည်း လောက်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူမဟာ ကလေး တွေကို တင့်တင့်တယ်တယ်ထားနိုင်တာကို ကျနော် လေးစားပါတယ်။ ချီးကျူးပါတယ်။ သူမနေရာမှာ ကျနော့်မိခင်ကို အစားထိုးပြီး စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း ထပ်တူမကျရင် တောင် ကျနော့်မိခင်လည်း ဒီလိုပဲ ရုန်းကန်ခဲ့ရမှာပဲ၊ ကျနော်တို့အတွက်ပေါ့။ တခုသာတာ က ကျနော်တို့ မိသားစုထဲမှာ၊ ကျနော့်မိခင်နားမှာ အဖေရှိခဲ့တော့ အမေဟာ သူမလောက် တော့ မပင်ပန်းခဲ့လောက်ဘူးပေါ့၊ ကျနော် ပြောသလိုပါပဲ၊ ထပ်တူမကျလောက်ဘူးဆိုတာ လေ၊ ဒါပေမယ့် တူတာတခုရှိတယ်၊ အဲဒါကတော့ မိခင်တိုင်း သားသမီးတွေအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ အချစ် အဲဒါတွေ ဖြစ်နိုင်၊ တူနိုင်ပါတယ်။ မိခင်တိုင်းဟာ သူတို့သားသမီး တွေကို ချစ်တဲ့အချစ်တွေဟာ အားလုံးတူညီနေကြတယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည့်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေကို ကျနော် မေးခွန်းတွေ မေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဝေဖန် ပိုင်းစစ်၊ စမ်းစစ်ဖို့ပါပဲ။ ကျနော်လည်း စမ်းစစ်ပါမယ်။
၁။ ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်သာလျှင် အမြင့်မြတ်ဆုံးလို့ ထင်သလား။
၂။ တခြားသော မိခင်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်လို့ လက်ခံနိုင်သလား။
၃။ ဘယ်လို မိခင်မျိုးကိုမှ ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်လို့ သတ်မှတ်ပါသလဲ။
အဲဒီမွေးခွန်းသုံးခုကို ဖြေကြည့်ကြရင်း၊ စဉ်းစားကြည့်ကြရင်း ကိုယ့်ရဲ့သဘောထား တွေကိုလည်း ပြောခဲ့ကြပါ။ ကဲ … စာဖတ်သူတွေပဲ စဉ်းစားလို့၊ ဖြေကြည့်လို့လဲ မပြီးပါဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြေကြည့်ပါမယ်၊ စဉ်းစားပြီး ကျနော့်သဘောထားကို ပြောပါမယ်။
ကျနော် ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကျနော့်မိခင်သာလျှင် အမြင့်မြတ်ဆုံးလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ သူများတွေကို မပြောရင်တောင် ကျနော့်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အဲဒီလို ထင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ဒီအသက်အရွယ်ထိရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဒီမေးခွန်းလေးကို ပြန်စဉ်း စားကြည့်မိတယ်။ - ငါ ငယ်ငယ်တုန်းက ထင်ခဲ့သလို မဟုတ်ပါလားဆိုတာ သိလာရတယ်။ မြင်လာတယ်။ သူစိမ်းနယ်ထဲကို ခြေချလာခဲ့တာရယ်၊ ကျနော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံအရလည်း သိလာရပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်သာလျှင် အမြင့်မြတ်ဆုံး မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ မိခင်တိုင်း၊ မိခင် တိုင်းဟာ မြင့်မြတ်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ မိခင်တိုင်းဟာ သားသမီးတွေအတွက် တော့ အမြင့်မြတ်ဆုံးပါပဲ။ မိခင်တိုင်းရဲ့ မြင့်မြတ်ပုံချင်း မတူညီတာပဲ ကွာမယ်။ ကျနော် ထပ်ပြောပါရစေ … မိခင်တိုင်း … မိခင်တိုင်းဟာ ဘာသာလူမျိုးကွဲပြားပါစေ၊ အသားအ ရောင် ကွဲပြားပါစေ၊ မိခင်ဟာ မိခင်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် အားလုံးသော မိခင်တွေဟာ အမြင့်မြတ် ဆုံးပါပဲလို့ ကျနော် အဲဒီလို ရဲရဲကြီးကို ယုံကြည်တယ်။ လက်လည်း လက်ခံပါတယ်။
၂။ တခြားသော မိခင်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်လို့ လက်ခံနိုင်ပါသလား။
ဒီမေးခွန်းကို လူတိုင်း ဘယ်လိုဖြေကြမလဲတော့ မသိဘူးဗျ၊ ကျနော်က လည်း တော်တော့ကို စဉ်းစားယူရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်လည်း လူသား ထဲက လူတယောက်မို့လို့ပါပဲ။ ကိုယ့်မိခင်ကလွဲပြီး တခြားသော မိခင်တွေကို ဘယ်သူတွေ က လက်ခံနိုင်ပါ့မလဲ။ အနည်းအများပေါ်မှာလဲ မူတည်ပါတယ်။ သေချာတာတခုတော့ ရှိ တယ်။ အဲဒါကတော့ ကျနော် အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် တခြားသော မိခင်တိုင်းကို ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်ရယ်လို့ လက်မခံထားနိုင်သည့်တိုင် စဉ်းစားပြီး သဘောထားပြည့်ဝစွာ စာနာနားလည် ပြီး လက်ခံနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပြောလိုက်လို့ အံ့သြမသွားကြပါနဲ့ ကျနော် အထက်က မိခင်တို့ရဲ့အ ကြောင်းကို ပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ မိခင်တွေ စာနာတယ်၊ နားလည်တယ်၊ မိခင်တိုင်းကို ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်လို့ သဘေားထားပြီး ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော့်ကိုယ် ကျနော် အဲဒီ လို လက်ခံယုံကြည်ပါတယ်။ အပြည့်အ၀တော့ ဖြစ်ချင်မှလည်း ဖြစ်မှာပါ။
စာဖတ်သူတွေအားလုံး စဉ်းစားကြပါ။ ငါက ဘယ်လိုရှိတယ်၊ ငါ့ခံစားချက် က ဒီလိုပဲလားဆိုတာတွေကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် စဉ်းစားပြီး ဖြေကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကျနော်ကိုယ်တိုင် မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းကို ကျနော် ဘယ်လို ပြန်ဖြေရမလဲ မသိတော့ဘူး၊ မေးခွန်းက နည်းနည်းခက်သွားတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ကြိုး စားပြီး ဖြေပေးပါ့မယ်။
ကျနော် ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အတွေးကို ပြောပြချင်တယ်။ ကျနော့်မိခင် ဟာ ကျနော်တို့အပေါ်မှာ ယုယမှုတွေ ပေးတဲ့၊ ဂရုဏာတရား ပေးတဲ့၊ အလိုလိုက်တတ်တဲ့ စသည်ဖြင့်ပါပဲ၊ အဲဒီလို မိခင်မျိုးကို ဖြစ်စေချင်ခဲ့တာလေ။ အဲဒီလို တွေးထင်ခဲ့တာတွေ၊ ဖြစ်စေချင်တာတွေဟာ ကျနော်တို့အပေါ်မှာ တကယ်ပဲ အဲဒီလို ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
နောက်တခုရှိသေးတယ်၊ လူသားအားလုံး သို့မဟုတ် သားသမီးတိုင်းအား လုံးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်ကိုတော့ မိခင်ကောင်း၊ မိခင်မြတ်ဖြစ်စေချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ "အို မိခင် ခွင့်လွတ်ပါ" ကျနော်ပြောမယ့် စကားလုံးအသုံးအနှုန်းအတွက် နားနဲ့မနာ၊ ဖ၀ါးနဲ့သာ နာပါလို့ ပြောပါရစေ။ တချို့သော လူသားတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မိခင် မကောင်းတဲ့ မိခင်ဖြစ် ကြည့်၊ ဆိုးသွမ်းတဲ့ မိခင်ဖြစ်ကြည့် သူတို့တွေဟာ ကိုယ့်မိခင်ပါလို့ သူတပါးကို ပြောဆိုပြဖို့ ရာ ခက်ခဲကြမယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ တချို့သော လူသားတွေနော်။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်ရော အဲဒီလိုမျိုးသာ ကိုယ့်မိခင်ဖြစ်ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ၊ ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်မိခင် ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ ထာဝစဉ်သာ ကိုယ့်မိခင်ပါပဲ။ ကျနော့်ရဲ့ ဦးထိပ်မှာ မိခင်ကို ထားပါ့မယ်။ ဒါဟာ ကျနော့်ရဲ့ နှလုံးသားက သတ်မှတ်တဲ့ ခံစားချက်စကားတွေပါပဲ။ စာဖတ်သူတွေရော ဘယ်လိုမျိုး သတ်မှတ်မလဲ၊ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။
မိခင်တွေဟာ အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်သွားတာတောင် သားမီးတွေကို ဘယ်လောက်ချစ်သ လဲ။ သူတို့ အိုမင်းသွားရင်၊ သေဆုံးသွားရင်တောင် သူတို့မေတ္တာဟာ အိုမင်းသွားမယ် မဟုတ်ပါ၊ သေဆုံးသွားမယ်မဟုတ်ပါ၊ အမြဲထာဝရသစ်လွင်ရှင်သန်နေမယ်ဆိုတာ ကျနော် ယုံယုံကြည်ကြည် ပြောချင်ပါတယ်။ အခု သူငယ်ချင်းတယောက်ဆီက ရခဲ့တဲ့ စာသားလေး တချို့ကို ပြန်ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ အဲဒီ မိခင်ရေးထားတဲ့စာက "ငါ အိုသွားတဲ့ အခါ"တဲ့။
ငါ အိုသွားတဲ့ အခါ
"တနေ့ထက် တနေ့ အိုစာသွားတဲ့ ငါ့ကိုကြည့်ပြီး ၀မ်းမနည်းပါနဲ့၊ နားလည် ပေးပါ၊ အားပေးပါ၊ အရင်တုန်းက လူ့ဘ၀သက်တမ်းအတွက် ငါ လမ်းညွန်ခဲ့သလို အခုအ ချိန်မှာ ငါ့ဘ၀ နောက်ဆုံးအချိန်တွေအတွက် အဖော်ပြုပေးပါ။ အချစ်နဲ့ အေးမြမှုတွေကို ငါ ပြုံးပြုံးလေး လက်ခံမှာပါ။ အဲဒီအပြုံးတွေထဲမှာ မဆုံးတဲ့ ငါ့ မေတ္တာတွေ တွေ့ရမှာပါ။"တဲ့။
ဒီစာသားလေးကို မိခင်တယောက်ရေးခဲ့တဲ့ စာသားလေးပါ။ စာဖတ်သူအားလုံးကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်တွေကို အဲဒီလိုမျိုး ပြောထားတဲ့အတိုင်းတာ လျှောက်သွားမယ်ဆိုရင် မိခင်တိုင်းရဲ့ အပြုံးတွေ ဝေေ၀ဆာဆာ ပွင့်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။
ကျနော်နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အမတယောက်ဟာ သားသမီးတယောက်ရဲ့ ခံစား ချက်လေးကို ပြောပြပါတယ်။ ဒီမှာ ကျနော် ပြန်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။
"ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ မိခင်တိုင်း … မိခင်တိုင်းရဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာတွေဟာ ဘာနဲ့မှ နှိုင်းယှဉ်လို့မှမရအောင် ကြီးမားပါတယ်။ ကျမအကြောက်ဆုံးကတော့ ကျမဘေးနားမှာ အမေမရှိတော့မှာကိုပါဘဲ၊ ကျမဘေးနားမှာ အမေရှိနေရင် လုံခြုံစိတ်ချပြီး ပြည့်စုံပြီလို့ ယုံ ကြည်တယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးလာလေ အမေတယောက်ရဲ့ မေတ္တာကြီးမားမှုကို ပိုပြီးနား လည်ခဲ့ရလေ ဖြစ်ပါတယ်။"
အိုခြင်း၊ နားခြင်း၊ သေခြင်းဆိုတဲ့ အနိစ္စတရားကို ဘယ်သူမှ၊ ဘယ်အရာကမှ မကျော်လွှားနိုင်ဟု ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
မိခင်တို့ရဲ့ မေတ္တာဟာ အနိစ္စတရားကို ကျော်လွန်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ကျနော် ယုံ ကြည်နေမိတယ်။
မိခင်တို့ရဲ့ မေတ္တာဟာ ဘယ်အခါမှာမှ မအိုမင်း …
မိခင်တို့ရဲ့ မေတ္တာဟာ ဘယ်အခါမှာမှ မထိခိုက်နိုင် …
မိခင်တို့ရဲ့ မေတ္တာဟာ ဘယ်အခါမှာမှ သေဆုံးသွားလိမ့်မယ် မဟုတ်ပါ။
၂၀၀၈ ခုနှစ်။ မေလ (၂)ရက်။
10:04 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
အဖွားမာ (ခ) လူထုဒေါ်အမာ ကွယ်လွန်
10:57 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
သတင်းစာဆရာမ၊ စာရေးဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာ (ခ) အဖွားမာ ကွယ်လွန်
သတင်းစာဆရာမ၊ စာရေးးဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာ (ခ) အဖွားမာ အသက် (၉၃) နှစ်သည် ယနေ့နံနက်
(၈) နာရီ (၃၇) မိနစ်တွင် မန္တလေးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်သွားသည်။
သားဖြစ်သူ ကိုညီပုလေးက “ယခု (၈) နာရီ (၃၇) မိနစ်က ဆေးရုံမှာ ဆုံးတယ်ခင်ဗျ။
မန္တလေးဆေးရုံ နှလုံးရောဂါအထူးကုဆောင်မှာပါ” ဟု ပြောသည်။
2:53 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ကန့်ကွက်မဲတွေ ပေးကြပါ ...
World Poetry Day နေ့
2:39 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ဒီနေ့ည ဒေါင်းရင်ပြင်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် World Poetry Day နေ့ အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ
Posted in: ကြော်ငြာ
12:12 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ကြယ်တပွင့် ကြွေကျ မြေခခဲ့တယ်
သူဟာ အနီရဲရဲ ကြယ်ဖြစ်တယ်။
ကြွေချိန်မတန်ပဲ ကြွေလွှင့်ခဲ့တဲ့ ကြယ်နီရေ ...
သူတို့ အားလုံးရဲ့ ရင်ဘတ်ကြီး
ကတိပေးပါတယ် ကြယ်နီ ...။
သူရဲကောင်း အာဇာနည်ရေ ...
(၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရသော အမျိုးသား သူရဲကောင်း တီးမန်းရှာသို့)
ထနောင်း (၁၆၊ ၂၊ ၂၀၀၈)
အတီးရေ ... စိမ်းညိုနေတဲ့ မိုးမခတောတွေလည်း ချက်ချင်း ၀ါကျင်ကျင်ဖြစ်လို့သွားတယ်။ တော်လှန်သောင်ရင်းရဲ့ ရေအလျင်တွေလည်း ရပ်ဆိုင်းသွားတယ်။ ဆောင်းနှောင်း နွေဦးမှာ မိုးခြိမ်းသံတခုကို ကြားလိုက်ရတယ်။ ကမ္ဘာမြေတခွင်လုံး ချက်ချင်းဆွံ့အသွားတယ်။ မဟာပထ၀ီမြေကြီး အိုးထိမ်းစက်ပမာ သွက်သွက်လည်ခဲ့ပေါ့။
ကိုနေဘုန်းလတ်ဖမ်းဆီးခံထားရခြင်းအပေါ် ဘလော့ဂ်ဂါအချို့ရဲ့ ခံစားချက်အမြင်များ
3:51 PM မာန်လှိုင်းငယ် 1 comment
DVB television မှ ပြန်လည်ကူးယူ တင်ပြလိုက်ပါတယ်
လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်က ကိုကြီးနေဘုန်းလတ်သို့
1:04 PM မာန်လှိုင်းငယ် 1 comment
ကျနော် ကိုကြီးနေဘုန်းလတ် အဖမ်းခံတယ်ကြားကြားချင်း ကိုကြီးနေဘုန်းလတ်အတွက် ပို့စ်တင်ပေးဖို့ရာ။ ကျနော်လည်း မအားလပ်တာကြောင့် ဘလော့ဂ်ဘက်ကို မလှည့်ဖြစ်ခဲ့ ဘူး။ အခုတော့ ကိုကြီးနေဘုန်းရဲ့ တနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အတွက် ဆုတောင်းပို့တွေ ရေးနေကြတာ သိရတော့ ကျနော် ၀မ်းသားတယ်ဗျာ။ ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း လိုက်ဖတ်ရင်း ကိုကြီးနေဘုန်းအတွက် ဆုတောင်းပေးဖို့ လုပ်ပါပြီဗျာ။ ကျနော်နဲ့ ကိုကြီးနေဘုန်း ခင်မင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးကို နည်းနည်း ပြောပြချင်ပါတယ်ဗျာ။
ကျနော် ကိုကြီးနေဘုန်းရဲ့ မြို့တော်ကို သွားရောက်ပြီး ရသ။ သုတ။ ဗဟုသုတဟင်းအိုးကြီးကို သွားရောက်နှိုက်နေတာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ စီဘောက်မှာတော့ စာတွေ မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ရံဖန်ရံခါမှတာ ကျနော် ရေးသွားခဲ့ပါတယ်။
ကျနော် ကိုကြီးနေဘုန်းနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ ကိုကြီးနေဘုန်း အဖမ်းမခံရမီ အချိန် ရက်အနည်းငယ်ကပါ။ ကိုကြီးနေဘုန်းနဲ့ ကျနော် စကားပြောဖြစ်ခဲ့တာ တရက်ထဲပါပဲ။ ဘယ်လောက်မှမကြာဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာ ကိုကြီးနေဘုန်းကို ကျနော်လေးစားတယ်။ အားကျတယ်။ ကိုကြီးနေဘုန်းဟာ အရမ်းကို ခင်မင်စရာကောင်းတဲ့ လူပါပဲ။ ကျနော်တို့နဲ့စကားပြောရင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ ရင်ထဲရောက်အောင် ပြောနိုင်တဲ့ လူပါ။ နောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ် ကိုကြီးနေဘုန်း စိတ်ဓါတ်ကိုပါ။ သူက လူငယ်လူရွယ်တွေကို အသိပညာတိုးပွားစေချင်တဲ့ စိတ်ရယ်။ ဘလော့ဂ်နည်းပညာ ပြန့်ပွားရေးကို အားစိုက်လုပ်ကိုင်တတ်တဲ့ စိတ်ကို ကျနော် လေးစား ဂုဏ်ယူပါကြောင်း ဒီမှာ ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ ကိုကြီးနေဘုန်းရေ … ညီလေး မျှော်နေပါတယ်။ ကျန်းမာစွာနဲ့ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။
လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်က ကိုကြီးနေဘုန်းလတ်သို့ ….
နေ့တနေ့ မနက်ခင်းလေး အဆုံး
12:56 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ငါ့ကိုယ်ငါ အသုံးချ …
ဘယ်သူ လျှောက်သလဲ …
ဘယ်သူ ရောက်သလဲ …
ဘယ်သူ … လျှောက် … လျှောက်
ဘယ်သူ … ရောက် … ရောက်
နေ့တနေ့ မနက်ခင်းလေး အဆုံး …
ဒီလမ်းကို အသုံးချမြဲ။ ။
11:53 AM မာန်လှိုင်းငယ်5comments
ငါ ကဗျာတွေ ရေးတော့
ဖေဖေက အားပေးအပြုံးနဲ့ ကြည့်တယ်
ကိုကြီးက လှိုက်လှဲစွာ တွန်းပို့တယ်
ညီမလေးက ကဗျာရူးလို့ အရယ်မျက်နှာနဲ့ ပြောတယ်။
ငါ ကဗျာတွေ ရေးနေတုန်းပဲ
အဲဒီမျက်နှာတွေကို ငါ မြင်နေတုန်းပါပဲ
ဒါပေမယ့် … … ဒါပေမယ့် … …
3:34 PM မာန်လှိုင်းငယ် 1 comment
ငါဟာ အတိတ်ကို အတိတ်မှာ ထားခဲ့ဖို့
၂၀၀၇ နဲ့ ၂၀၀၈ ကို ခြားနားပေးလိုက်ပါပြီ။
၂၀၀၈ ကို တခမ်းတနား ကြိုဆိုကြ
၂၀၀၈ ထဲ မရဲတရဲ လှမ်းဝင်ကြ
ပြတင်းဝကို လိုက်ကာနဲ့ ပိတ်လိုက်သလို
၂၀၀၇ ကို ဖုံးပိတ်
၂၀၀၈ ကိုတော့ မြေလှန်တူးဆွနေရပြီ။
ချိပ်ပိတ်ခံထားရတဲ့ ပြတင်းတံခါးကိုပဲ ငေးကြည့်နေရ… ။ ။
4:01 PM မာန်လှိုင်းငယ်2comments
ဒီအိမ်မက်နှင့် အနာဂတ်လေး စာစုလေးကို ကျနော် ဒိုင်ယာရီအဟောင်းလေးကို ပြန်လှန်နေတုန်းတွေ့လို့ ဒီမှာ သယ်ရင်းများအားလုံးကို ဖတ်စေချင်တာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
လူတွေဟာ နေ့စဉ်လိုလို သွားလာလှုပ်ရှားကြ အလုပ်ကိုယ်စီသွားကြ တနေ့တာလုပ် ဆောင်ရမည့် အလုပ်ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ကြနဲ့ ။
နေကွယ်လာပြီးဆိုတာနဲ့ ငါတို့ဟာ အိပ်စက်အနားယူရမယ့် အချိန်တော် ရောက်လာတော့မှာ လား လို့ပြော ကြတယ်။အဲဒီလို အိပ်ယာဝင်တော့မယ်ဆိုရင် လူတွေဟာ တွေးပြီး စဉ်းစားကြမှာဘဲ။
ငါတို့ရဲ့ အနာဂတ်ကို ငါတို့ ဘယ်လို လျှောက်လှမ်းရမလဲ။ လုပ်ဆောင်ရမလဲ ဆိုတာကို ဘဲ စဉ်းစား မိကြမှာပါ။ ဒီလိုပဲ စဉ်းစားပြီး တွေးပူနေ ကြလိမ့်မယ်။
ငါလည်းဘဲ ဒီလိုလူမျိုးတွေလို ဖြစ်ရင်လည်း အနာဂတ်အတွက် စဉ်းစားရင်း ပူပန်မိမှာဘဲ။
ဒီလိုဘဲ နေထွက်လာရင် နေ့ရဲ့အလင်းရောင်ကို ခံစားရလိမ့်မယ်။ နေကွယ်လာရင်လည်း ညရဲ့အမှောင်ထုကြီးကိုဘဲ ခံစားရမှာပါ။ ဒါတွေဟာ ဖြစ်မြဲတရား တွေပါ။ လူတွေဟာလည်း ဒီလိုသဘောမျိုး သက်ရောက်တာဘဲ။ နေ့အလင်းရောင်ကို မြင်ရတာနဲ့ လူတွေဟာ ပျာယာခတ်ပြီး၊ ကိုယ့်မှာရှိသမျှ အလုပ်ကို ကုန်းကုန်းပြီး လုပ်ကြနဲ့ ရင်မောစရာ ပါဘဲ။
ဒီလိုကြားထဲမှာ လူတွေဟာ အနားယူဖို့ ၊စိတ်ကို အနားပေးဖို့ မစဉ်းစားမိ ကြဘူးလား၊စဉ်းစားမိ ကြလားဆိုတာတော့ မပြောတတ်။ တချို့လူတွေကတော့ စဉ်းစားမိကြမှာဘဲ။ မစဉ်းစာမိတဲ့ လူများလည်းရှိမှာပါ။ စဉ်းစားမိသည် ဖြစ်စေ၊ မစဉ်းစားမိသည် ဖြစ်စေ၊ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုတော့ အနားပေးရမှန် ပဲ။
ဒီလို အနားယူမှဘဲ အိပ်ယာဝင်တဲ့အခါ အိပ်မက်လှလှလေးတွေလည်း မက်တတ်တယ်။ မလှတဲ့ အိပ်မက်လည်း မက်တတ်တယ်။
ဒီလိုအိပ်မက်တွေ မက်ကြတဲ့အခါ လူတွေဟာ အိပ်မက်အကြောင်းတွေက်ို ပြန်စဉ်းစားမိလျှင် ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်သလား။ ကောင်းကောင်း မက်ရင်ဖြစ်စေ၊ အဆိုးမက်သည်ဖြစ်စေ၊ ဒီအပေါ် ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်သလား။
အလားတူဘဲ အနာဂတ်အတွက် ရင်ဆိုင်ရမဲ့ ပြသနာတွေကို ကျော်လွှားဖြတ်သန်း နိုင်သည် ဖြစ်စေ၊ လူတွေဟာ ဘယ်လိုမျိုး ခံစားရသလဲ။ ငါ့အနေနဲ့ စဉ်းစားမိတယ်။ အနာဂတ်မှာ ရင်ဆိုင်ရမဲ့ ပြသနာတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နဲ့ ကျော်လွှားဖြတ်သန်း နိုင်ခဲ့လျှင် မုချ ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်မိမှာပါ။
ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင် လူတွေဟာ မှဲ့ကြမှာဘဲ။ ငါလည်း ဒီလိုဖြစ်မိ မှာပဲလေ။ ဒီလိုက ဘဲ လူတွေရဲ့ ဘ၀တွေဟာ အိပ်မက်လော အနာဂတ်လော ။ အိပ်မက် နှင့် အနာဂတ်ဟာ တူကြပါသလား။
12:24 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
If we were waves,
They are the stone (piece of rock).
They can not control upon our.
So, We can win theim, oneday.
If they were waves,
We are the stone (piece of rock).
They can control upon our,